अब महरासँग प्रहरी हि*रासतमा ब*सेर आफूवि*रुद्ध लागेको आ*रोपको का*नुनी प्र*तिरक्षा गर्नु बा*हेक अरु वि*कल्प छैन ! – सिधा अनलाइन खबर
अब महरासँग प्रहरी हि*रासतमा ब*सेर आफूवि*रुद्ध लागेको आ*रोपको का*नुनी प्र*तिरक्षा गर्नु बा*हेक अरु वि*कल्प छैन !
Sidha Kura | October 5, 2019 | Comments
काठमाडौं : ब*लात्कार आ*रोप ला*गेपछि प*दबाट रा*जीनामा दिएका (नि*वर्त*मान) स*भामुख कृ*ष्णबहादुर महराको रा*जनीतिक ‘क*रिअर’ ध*रापमा छ। रा*जनीतिक व्य*क्तित्व त ग*र्ल्याम*गुर्लुम ढ*लेको छ नै उनको च*रित्रमा पनि ग*म्भीर प्रश्न उ*ठेको छ। अब प्रहरीको हि*रासतमा ब*सेर न्या*यालयसमक्ष आफूवि*रुद्ध ला*गेको आ*रोपको का*नुनी प्र*तिरक्षा ग*र्नु बा*हेक अरु वि*कल्प महरासँग छैन। अर्थात्, आफूलाई लगा*इएको ब*लात्कार प्र*यास आ*रोपको का*नुनी प्र*तिरक्षा गर्ने अ*धिकार उनीसँग सु*रक्षित छ।
स*म्भवतः भोलि (आइतबार) अ*दालत खु*लेपछि प्रहरीले उनलाई प*क्राउ गर्नेछ। किनभने अब महरालाई पक्राउ नग*र्नुपर्ने कुनै का*रण प्रहरीसँग छैन। यसअघि प्रहरीले ‘कि*टानी जा*हेरी न*परेकाले पक्राउ ग*र्न नसकेको’ ज*वाफ दिने गरेको थियो। का*नुन अनुसार हेर्दा प्रहरीले पहिले अ*दालतबाट पक्राउ पू*र्जी लि*नेछ। र, महरालाई पक्राउ गर्नेछ। महरा वि*रुद्ध संसद् स*चिवालयमा का*र्यरत एक महिला कर्मचारीले आफूलाई ब*लात्कार प्र*यास ग*रेको आ*रोप लगाएकी छन्। महरासँग पा*रिवारिक स*म्बन्धमा रहेकी ती महिलाले शनिबार महानगरीय प्रहरी वृ*त्त, नयाँ बानेश्वरमा कि*टानी जा*हेरी दिएकी हुन्।
यसअघि दुईवटा भि*डियो अन्त*र्वार्तामा उनले प*रस्पर वि*रोधी कुरा ग*रेकी थिइन्। पहिलो भि*डियोमा उनले आ*फूलाई महराले ब*लात्कार ग*रेको दा*बी गरेकी थिइन्। र, दोस्रो भि*डियोमा महरा ‘बा*बुसमान रहेको’ भन्दै महरामाथि ला*गेका स*बै आ*रोपलाई ‘ष*ड्यन्त्र’ भनेकी थिइन्। ती महिलाले नागरिकखबर अ*नलाइनबाट आफ्नो प*रिचयसहित प*रस्पर वि*रोधी ब*यान दिएपछि पहिलो भि*डियो अ*न्तर्वार्ता सा*र्वजनिक गर्ने हाम्राकुरा अ*नलाइनले पहिले खि*चिएको भिडियो सा*र्वजनिक ग*रेको थियो।
तेस्रो भि*डियोमा महरा र आ*फूबीच भएका च्या*ट, म्या*सेजहरूलाई उनले आफूमाथि दु*र्व्यवहार भएको पु*ष्टि गर्ने प्र*माणका रु*पमा दे*खाएकी छन्। महानगरीय प्रहरी प*रिसर काठमाडौंका प्र*वक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले महरावि*रुद्ध परेको उ*जुरीको “अ*नुसन्धानलाई ती*व्र बनाएको” ब*ताएका छन्। प्रहरी सुरुदेखि नै यो घ*टनासँग जो*डिएको छ। हाम्राकुराले गरेको भिडियो अ*न्तर्वार्तामा ती महिलाले आफू ब*लात्कृत भएको भन्दै प्रहरीलाई १०० मा फोन गरी जा*नकारी गराएपछि महरा आफ्नो को*ठाबाट बा*हिरिएको ब*ताएकी छन्।
ती महिलाले प्र*माण प्रहरीलाई दे*खाएको पहिलो भि*डियोमा बताएकी थिइन्। अब प्रहरीसँग महरालाई पक्राउ ग*री घ*टनाको अ*नुसन्धान ग*री मु*द्दा दा*यर ग*र्नेबाहेक अरु वि*कल्प छैन। मु*लुकी फौ*जदारी का*र्यविधि सं*हिता, २०७४ मा यस स*म्बन्धी का*नुनी व्य*वस्था छ। पी*डित भनिएकी महिलाले शनिबार क*सूरको जा*हेरी द*रखास्त दिएकी छन्। यसपछि प्रहरीले “कुनै क*सूर भएको वा भ*इरहेको वा हुन ला*गेको छ भन्ने जा*नकारी वा सू*चना वा सु*राक पा*ई सु*राक लिन गएका ब*खत वा आफ्नो उ*पस्थितिमा कुनै क*सूर भएमा त्य*स्तो क*सूर गर्ने ब्यक्तिलाई तु*रुन्त पक्राउ गर्नु पर्ने” मु*लुकी फौ*जदारी का*र्यविधि सं*हिता ऐ*न, २०७४ को व्य*वस्था छ।
काठमाण्डौमा बाइकमा चढेर केटीहरुको घाँटीको सिक्री लुछ्ने तीनजना चोर पक्राउ
बुहारीको ह*त्या ग*री फ*रार बाबुछोरा पक्राउ
मोरङ काण्ड- यसो भन्छन् अनिसका श्रिमती र आफन्तहरु, चिता माथि चडेन ला*श, ‘भिडियो सहित्’